Turkey: Xarumaha Xisbiga Kurdida oo la qarxiyey!
Home Somali News Turkey: Xarumaha Xisbiga Kurdida oo la qarxiyey!
Labo kamid ah xarumaha xisbiga Kurdida Turkiga ku leeyahay koonfurta dalkaasi ayaa Isniintii la qarxiyey.
Weeraradan bambaano ayaa lala beegsaday xarumaha xisbiga Kurdida Turkiga ee (HDP) oo ku yaal magaalooyinka Adana iyo Mersin ee koonfurta Turkiga.
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay xarunta ku taal magaalada Adana, waxaana la sheegay in sadex kamid ah dhaawaca ay xaaladoodu culustahay.
Weerarkan ayaa lagu soo beegay todobaadyo kahor doorashooyinka dalkaasi ka dhici doona 7da bisha soo socota ee June.
Xubno kamid ah Xisbiga HDP ayaa weeraradan ku eedeeyey xisbiga talada haya ee uu hogaamiye Madaxweyne Tayyib Erdogan.
Balse dowlada ayaa iska fogeysay eedaynta isla markaana cambaareysay qaraxyadan.
Raysalwasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa sheegay in sharciga la horkeeni doono dadka ka danbeeyey weeraradan.
Madaxweyne Tayyib Erdogan oo isugu shalay ka qeyb galay isu soo bax ka dhacay magaalada Samsun ee saaran bada madow ayaa dhankiisa cambaareeyey qaraxa, balse wuxuu sidoo kale eedayn dusha uga tuuray xisbiga Kurdida HDP oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin Jamhada kurdida ee PKK oo dalkaasi argagaxiso looga aqoonsan yahay.
“…Shacabka Turkiga waxaan ka codsanayaa inaysan codkooda siin xisbi ay hoosta uga jiraan kooxaha Argagaxisada…”ayuu yiri Tayyib Erdogan oo la hadlayey kumanaan isugu soo baxay magaalada Samsun.
Qaar kamid ah Hogaamiyayaasha xisbiga HDP ayaa dhankoodana ku eedeeyey Erdogan inuu taageero kooxda xagjirka ah ee ISIS.
Taageerayaasha HDP ayaa xalay socod ku maray bartamaha magaalada Istanbuul iyagoo cambaareenaya qaraxyada lala beegsaday xarumahooda, isla markaana kasoo horjeeda xisbiga talada haya ee AK partyga Erdogan.